Deg deg:Nimcaan hillaac oo arrin naxdin badan shaaciyay iyo sababta uu hargeysa uga cararay. - xog baahiye
Nimcaan hillaac ayaa wareysi laga qaaday ku shaaciyay arrimo xasaasi ah, oo ay kamid tahay sababtii uu Hargeysa uga cararay iyo waxa ku kallifay in uu ku noolaado meel ka baxsan Somaliland.
waxa uu ku nuux-nuuxsaday in xukuumadda Somaliland ay soo saartay xeer ka mamnuucaya dhammaan fannaaniinta jooga Hargeysa aysan tagi karin Muqdisho ayagoonan fasax ka heysan xukuumadda somaliland.
AKHRISO: Deg deg! Safiyo tusmo oo afka furatay kadib heesti kamayro waxii kusoo maray.
Nimcaan Hillaac ayaa sidoo kale caddeeyay in kabixidii uu ka baxay kooxda xidigaha geeska ay culeys weyn u keentay, isla markaana ku qasabtay in uu gebi ahaanba ka tanaasulo ku laabashada magaalada Hargeysa.waxa uu wareysiga ku muujiyay in loogu hanjabay dil haddii uu isku dayo in uu dib ugu soo laabto magaalada Hargeysa.
AKHRISO: Deg deg: nimcaan Hilaac oo hanjabaad kulul u diray muse biixi kana hadlay dilka wiilki boorame
Ma ahan markii ugu horreysay Nimcaan uu ka hadlo arrintan waxa uuna horay muuqaallo kale ku faahfaahiyay dhacdadii ku qabsatay magaalada hargeysa iyo sababta looga soo masaafuriyay halkaasi